रक्तचाप नियन्त्रण र स्वस्थ मुटुको चालका लागि ६ मूलमन्त्र – Health Post Nepal
२०७६ जेठ ३ गते ११:०१
मुटु तथा रक्तनलीका विभिन्न रोगमध्ये उच्च रक्तचाप संसारमै सबैभन्दा बढी देखिएको समस्या हो । विश्वमा हरेक चारमध्ये एक व्यक्तिलाई उच्च रक्तचाप भएको पाइन्छ । हरेक वर्ष विश्वमा करिब ७० लाख मानिसको उच्च रक्तचापका कारण मृत्यु भएको तथ्यांक छ । नेपालको सन्दर्भमा, सहरी क्षेत्रमा १८ वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरूमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढीलाई उच्च रक्तचापको समस्या देखिएको छ ।
उच्च रक्तचाप भएका बिरामीमा आट्रियल फिब्रिलेसन(Atrial Fibrilation) भनिने मुटुको चालको गडबडी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । आट्रियल फिब्रिलेसन हुँदा मुटुका माथिल्ला कोठाहरू जसलाई अट्रियम भनिन्छ, त्यसले बलियोसँग रगत पम्प गर्न सक्दैन । जसले गर्दा ती कोठाहरूमा रगत जम्ने सम्भावना हुन्छ र ती रगतका साना चोक्टाहरू उछिट्टिएर शरीरका रक्तनलीहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उच्च रक्तचापका बिरामीमा मस्तिष्काघात हुने सम्भावनासमेत बढी हुन जान्छ । यसैले उच्च रक्तचापको नियन्त्रण गरेर आट्रियल फिब्रिलेसनजस्ता मुटुको चालको गडबडी नियन्त्रण गरी मस्तिष्काघातजस्ता गम्भीर रोगको रोकथाम गर्नुपर्छ । उच्च रक्तचापबारे जनचेतना अभिवृद्धि गराई उच्च रक्तचाप रोकथाम गर्न, जाँच गर्न र उपचार गर्न अभिप्रेरित गर्नु र उच्च रक्तचापबाट हुन सक्ने मस्तिष्कघात, पक्षाघात, हृदयाघात र मिर्गौलाको खराबीजस्ता रोगको रोकथाम गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय उच्च रक्तचापका बिरामीको त अकस्मात् मृत्युसमेत हुन सक्छ । नियमित औषधि खानुका साथसाथै चिकित्सकसँग नियमित जाँच गराउनु, रक्तचाप नियमित रूपमा जाँच्नु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यदि उच्च रक्तचा पनि यन्त्रणमा छ भने तपाईं अन्य व्यक्तिसरह सामान्य गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ।
उच्च रक्तचापको संक्षिप्त विवरण :
मुटुबाट रगत पम्प भएर शरीरका सम्पूर्ण भागहरूमा सञ्चालन हुनेक्रममा रगतले रक्तनलीहरूमा एक प्रकारको चाप पैदा गर्दछ, यसलाई नै रक्तचाप भनिन्छ । बोलीचालीको भाषामा यसलाई ब्लडप्रेसर पनि भन्ने चलन छ । रक्तचापको अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरण (JNC –7Classification) अनुसार १२० का मुनि ८० भन्दा कमको रक्तचापलाई आदर्श रक्तचाप भनिन्छ । १ सय २० देखि १३९ का मुनि ८० देखि ८९ सम्मको रक्तचापलाई रक्तचापको पूर्वावस्था भनिन्छ । १४० का मुनि ९० वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थालाई उच्च रक्तचाप भनिन्छ । त्यसैले उच्च रक्तचाप भएका बिरामीका लागि लक्षित रक्तचाप भनेको १४० का मुनि ९० भन्दा कम हो । यो लक्ष्य मधुमेह वा मिर्गौला रोग भएका व्यक्तिहरूका लागि १३० का मुनि ८० भन्दा कम हो ।
टाउको दुख्ने (Headache), मुटुको ढुकढुकी बढेको अनुभव हुने (Palpitation), आँखा धमिलो हुने (Blurred Vision), नाकबाट रगत बग्ने(Epistaxis) आदि उच्च रक्तचापका केही प्रमुख लक्षण हुन् । तर, आधाभन्दा बढी उच्च रक्तचापका बिरामीमा यसको कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ । लक्षण भए पनि नभए पनि यसको उपचार तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अन्यथा, मस्तिष्क, मुटु, मिर्गौला, आँखाजस्ता महत्वपूर्ण अंगहरूमा क्षति पुग्न गई मानिस अपांग हुने तथा अकस्मात् मृत्युसमेत हुन सक्छ । यसैले यसलाई सुसुप्त हत्यारा अर्थात् Silent Killer पनि भनिन्छ ।
यो मुख्यतया जीवनशैलीसँग सम्बन्धित रोग हो । रक्तचाप दिनानुदिन बढ्नुमा दुईवटा मुख्य कारकतत्व छन् । यसलाई 2T पनि भन्न सकिन्छ, अर्थात् Technology (प्रविधिको विकास) र Transportation (यातायातको विकास) । यसले गर्दा मानिसको शारीरिक सक्रियता मात्र कम हुन गयो । त्यसअलावा हिजोआज अस्वस्थ खानाको प्रयोग पनि निकै बढेको छ । यी कारणले गर्दा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, उच्च कोलेस्टेरोलजस्ता रोग सहरी तथा उपसहरी क्षेत्रहरूमा ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । यसबाहेक उमेर र वंशानुगत कारणले पनि यो रोग हुन सक्छ ।
उच्च रक्तचाप रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय
उच्च रक्तचापको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु अति नै जरुरी हुन्छ । जीवनशैली परिवर्तनका लागि निम्न पाँच मूलमन्त्रलाई याद गर्नुहोस् । यिनीहरू सरल छन्, सम्भव छन् र प्रभावकारीसिद्ध पनि छन् । यी पाँचै मूलमन्त्रको सामूहिक प्रयासमा उच्च रक्तचापको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।
१.धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन त्याग्ने :
धूमपान गर्ने वा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने व्यक्तिमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । अतः यस्ता कुराको कदापि सेवन गर्नुहुँदैन । यदि उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा यस्तो अम्मल छ भने यसलाई चटक्कै छोड्नु नै बिरामीको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
२. नियमित व्यायाम गर्ने :
उच्च रक्तचापको एक प्रमुख कारकतत्व निष्क्रिय जीवनशैली हो । हरेक मानिसले प्रत्येक दिन कम्तीमा आधा घण्टा चलायमानखालका कुनै न कुनै व्यायाम गर्नुपर्छ । चलायमानखालका व्यायाम भन्नाले हिँड्ने, दुगुर्ने, पौडी खेल्ने, डोरी खेल्ने, खेतबारीमा काम गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पर्छन् । हिँड्नु सबैभन्दा राम्रो र सरल व्यायाम हो । एकैपटक आधा घण्टा व्यायाम गर्ने फुर्सद नभएमा कम्तीमा १०–१० मिनेट गरी दिनमा ३–४ पटक व्यायाम गर्न सकेमा पनि फलदायी हुन्छ । विभिन्न अध्ययनले नियमित व्यायाम गर्ने उच्च रक्तचापका रोगीमा औषधीले समेत राम्ररी काम गरेको तथ्य प्रमाणित गरेका छन् ।
३. नुन कम खाने :
नुन शरीरका लागि अत्यावश्यक लवणतत्व हो । तर, यो थोरै मात्रामा भए पुग्छ । एउटा स्वस्थ व्यक्तिले प्रतिदिन ५ ग्रामभन्दा बढी नुन खानु हुँदैन । अझ उच्च रक्तचाप भएका बिरामी, अन्य मुटुरोगी, मधुमेहीले दिनमा ४ ग्रामभन्दा बढी नुनको प्रयोग गर्नुहुँदैन । यस हिसाबले एक स्वस्थ व्यक्तिले महिनामा १५० ग्रामसम्म नुन खान सक्छन् भने मुटुरोगी, उच्च रक्तचापका बिरामीले १२० ग्रामभन्दा बढी नुन खानु हुँदैन । यस अर्थमा नुनको हिसाब राख्न थाल्नु उपयुक्त हुन्छ । १५० ग्राम नुन भनेको १५० एमएल अट्ने कचौराको एक कचौरा हुन्छ ।
नुन कम खाने भन्ने कुरा सरल सुनिए पनि यसका लागि हामी चनाखो हुनु जरुरी छ । अत्यधिक मात्रामा नुन हुने खानेकुरा, जस्तै, पापड, ससेज, सस, सिसीको अचार, दालमोठ, भुजिया, टिनका बट्टामा हुने खानेकुराहरू सकेसम्म कम खानुपर्छ । त्यस्तैगरी, नुन छर्केर वा थपेर खाने बानी गर्नुहुँदैन । कहिलेकहीँ उच्च रक्तचापका बिरामीले बिल्कुल नुन नखाने गरेको पाइन्छ, योचाहिँ सही उपाय होइन । नुन पटक्कै नखाने होइन, बरु कम खाने हो ।
नुनका साथसाथै उच्च रक्तचापको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चिल्लो पनि कम खानुपर्छ । चिल्लो कम भन्नाले तेलमा डुबाएर पकाएका, तारेका खानेकुराहरू खानुहुँदैन । साथै, जनावरजन्य चिल्लोपदार्थहरू, जस्तै, घिउ, बोसो, छाला, चिज, बटरजस्ता खाद्य पदार्थहरू सकेसम्म कम खानु पर्छ । साथै, प्रशस्त मात्रामा सागसब्जी, तरकारी तथा फलफूल खानुपर्छ ।
४. वजन घटाउने :
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि स्वस्थ वजन अत्यावश्यक हुन्छ । मोटोपन भएका मानिसमा उच्च रक्तचाप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
एउटा व्यक्तिका लागि स्वस्थ वजन कति हुन्छ भन्नेबारे विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणा छन् । तीमध्ये दुईवटाको विषयमा हामी यहाँ छलफल गर्छौं । एउटा हो द्यचयअब क्ष्लमभह, यसअनुसार आप्mनो उचाइलाई सेन्टिमिटरमा नाप्नुहोस् । त्यसमा १०० घटाउनुहोस् । जुन प्रतिफल आउँछ, त्यो नै तपाईंका लागि आदर्श वजन हो । यसको १० प्रतिशतसम्म तलमाथि भएमा पनि सामान्य मानिन्छ । जस्तै, तपाईंको उचाइ १६० सेन्टिमिटर छ भने तपाईंका लागि आदर्श वजन ६० केजी हो । यसको १० प्रतिशत अर्थात ६ केजीसम्म तलमाथि (५४केजीदेखि ६६ केजी) हुँदासम्म पनि सामान्य मान्न सकिन्छ ।
नियमित औषधि खानुका साथसाथै चिकित्सकसँग नियमित जाँच गराउनु, रक्तचाप नियमित रूपमा जाँच्नु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यदि उच्च रक्तचा पनि यन्त्रणमा छ भने तपाईं अन्य व्यक्तिसरह सामान्य गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ।
आफ्नो वजन सही छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाउने अर्को तरिका भनेको कम्मरको गोलाइ नाप्ने हो । भुँडी लाग्नुु उच्च रक्तचाप र क्रोेनरी मुटुरोगको जोखिम हो । कतिपय मानिसको वजन सामान्य भईकन पनि पेट लागेको हुन्छ, जुन अस्वस्थ अवस्था हो । सामान्य पुरुषको कम्मरको गोलाइ ३५ इन्च वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ भने महिलाको कम्मरको गोलाइ ३१ इन्च वा सोभन्दा कम हुनुपर्छ ।
५. औषधि खाने :
औषधिको कुनै विकल्प छैन । उच्च रक्तचापका बिरामीले चिकित्सकले सिफारिस गरेबमोजिम नियमित औषधि खानैपर्छ । औषधि खाएन भने उच्च रक्तचापको नकारात्मक असर हुन सक्छ । यसबाट पक्षाघात, हृदयाघात, किड्नी फेल हुने आदि हुन सक्छ । यति मात्रै होइन, कतिपय उच्च रक्तचापका बिरामीको त अकस्मात् मृत्युसमेत हुन सक्छ । नियमित औषधि खानुका साथसाथै चिकित्सकसँग नियमित जाँच गराउनु, रक्तचाप नियमित रूपमा जाँच्नु पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यदि उच्च रक्तचा पनि यन्त्रणमा छ भने तपाईं अन्य व्यक्तिसरह सामान्य गुणस्तरीय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ ।
६.मुटुको चालको गडबडीको पहिचान तथा उपचार :
उच्च रक्तचाप भएका बिरामीले चिकित्सकको सल्लाहमा नियमित इसिजी भनिने जाँच गरेर आप्mनो मुटुको चालको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यदि कसैमा आट्रियल फिब्रिलेसन (Atrial Fibrilation)को समस्या छ भने त्यस्ता बिरामीलाई रगत पातलो गर्ने औषधि दिएर यसबाट हुन सक्ने नकारात्मक जोखिमको रोकथाम गर्न सकिने समस्या छ भने त्यस्ता बिरामीलाई रगत पातलो गर्ने औषधि दिएर यसबाट हुन सक्ने नकारात्मक जोखिमको रोकथाम गर्न सकिन्छ ।